Ogaden News Agency (ONA) – Munaasabadii 15ka August Oo Maanta Si Aan Loo Kala Hadhin Looga Xusay Nairobi
Munaasabadii 15ka August Oo Maanta Si Aan Loo Kala Hadhin Looga Xusay Nairobi
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa maanta waxay ka dhacday xarunta wadanka Kenya ee Nairobi. Munaasabadan oo ay kasoo qaby galeen dadwayne farabadan oo ka kala yimid dacalada Niarobi iyo gobolka waqooyi bari kuna labisnaa calanka bilicda san ee shacabka Ogaadeeniya, ayaa lagu xusayey looguna dabaal dagayey xuska sanad guuradii 30aad ee kasoo wareegatay aasaaska ururka ONLF.
Xafladii maanta ayaa oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa sidoo kale waxaa xusid mudan oo maanta kasoo qayb galay markii ugu horaysay oo aysan u kala hadhin xubno iyo masuuliyiin mataleyey jaaliyadaha faraha badan ee shacabka Soomaaliyeed iyadoo aan si gaar ah uga xusi karno jaaliyadaha kala ah Jaaliyada Soomaaliland,Khaatumo State,Puntland,Galmudug,Xibin iyo Xeeb,jaaliyada Koofur galbeed Soomaaliya,Jaaliyada Jubbaland iyo ururka dhalinyarada gobolka waqooi bari Kenya.
Munaasabada maanta ayaa sidoo kale waxaa kasoo qayb galay masuuliyiin sar sare kamid ah Ururka ONLF.
Xaflada maanta oo uu si rasmi ah u furay isuduwaha jaaliyada Ogaadeeniya ee dalka Kenya Eng. Axmed Cali Soofe ayaa halkaasi kasoo jeediyey khudbad taariikhi ah oo ka hadlaysa marxaladihii uu soo maray halganku,Xaalada Geeska Africa iyo burburka iyo kala cararka uu hadda kusugan yahay gumaysiga madow ee Ethiopia.
Sidoo kale wuxuu mudane Axmed Cali ka hadlay talaabooyinkii is xigay ee uu gumaysiga nafla caariga ah ka fuliyey wadanka Kenya, ee lahaa dilalalka fulaynimada ah iyo af-duufbii masuuliyiinta JWXO.
Masuuliyiinta khubadaha maanta ka jeediyey munaasabada waxaa kamid ahaa gudoomiyaha gudiga qaxootiga Ogaadeeniya Eng. Axmed Faarax Maxamuud oo isugu munaasabada ka akhriyey barnaamij kusaabsan taxanaha halganka iyo hadafkii loo aasaasay ururka ONLF iyo dhibaatada goonida ah ee qaxootiga Ogaadeeniya.
khudbada mudane Axmed Faarax waxa ay la gooni ahayd iydoo ku baxaysay luuqada Englishka maadaama munaasabadan ay joogeen dad ajanabi ah iyo warbaahinta wadanka Kenya kuwooda ugu afka dheer.
Sidoo kale waxaa munaasabada hadalo qiiro iyo guubaabo xambaadhsan kasoo jeedisay halganto Sahra Ismaaciil Qoorcade oo dad waynihii munaasada isugu yimid ku guubaabisay inay uguntadaan sidii loo soo dadajin lahaa cimriga cadceeda casar joogta ah ee gumasiga Ethiopia.
Munaasabada ayaa waxaa laga akhriyey khudbad aad u qiima badnayd oo uu gudoomiyah JWXO ugu talgalay munaasabada 15ka August taasi oo isugu jirtay Taariikh,Xogwaran,Guubaabo iyo Dardaaran.
Barnaamijyadii maanta loogu talagalay xuska munaasada 15 August ee ka dhacday magaalad Nairobi ma ahayn oo kaliya khudbado ee waxaa dadwaynihii isugu yimid munaasabada aad dareekooda-wadani u dhaqaajiyey suugaantii qiimaha badanayn ee munaasabada ay kusoo ban dhigeen kooxda Danab ee jaaliyada Ogaadeeniya ee magaalada Nairobi.
Suugaantii maanta munaasabada lagu soo bandhigay oo u badnayd Dhaantooyin wadani ah oo wada cusub ayaa waxaan meesha ka maqnayn Heesaha wadaniga ah ee kuqotomay 15ka August.
Munaasaban maanta lagu qabtay Niarobi oo aan hadal iyo qoraal lagu soo koobi Karin wacdarihii ka dhacay hoolka wayn ee munaasabadu kasocotay, ayaa waxay kusoo dhamaatay jawi aad u farxad badan iyadoo kasoo qayb gala yaashu ay aad u jeclaayeen inay munaasabadu sii socoto.
Kala soco Ilays Tv muuqaalada munaasabada iyo dhaantooyin xiisabadan saacadaha soosocda
Xafiiska Warfaafinta JWXO